कसरी मुक्त गर्न को लागी After Effects एडोब प्राप्त गर्न को लागी -After Effects पछि नि: शुल्क एडोब डाउनलोड गर्नुहोस्
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > कसरी मुक्त को लागी After Effects एडोब प्राप्त गर्न को लागी [नेपाली संस्करण]
कसरी मुक्त को लागी After Effects एडोब प्राप्त गर्न को लागी
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-08-31, Nepali Blog
मुक्त को लागी AFTER EFFECTS
एक $ २१ महिना को सदस्यता को लागी भुक्तानी बिना After Effectsपछि मुक्त एडोब को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ? चलो पत्ता लगाउनुहोस् कसरी मुक्त गर्न को लागी एडोब After Effects र यो दृश्य प्रभाव र गति ग्राफिक्स सफ्टवेयर को परीक्षण शुरू गर्न को लागी अब। सबै तपाइँ फटेको/टोरेंट संस्करण को गोप्य खतराहरु को बारे मा जान्न को लागी, सबै भन्दा राम्रो मुक्त Adobe प्रभाव को विकल्प को समीक्षा र मुक्त भिडियो सम्पादन LUTs डाउनलोड गर्नुहोस्।
कुनै फरक पर्दैन कती धेरै एडोब प्रभाव टोरेंट फाइलहरु पछि तपाइँ देखीरहनुभएको छ, यो पनी प्रभाव बिना प्रत्यक्ष र सदस्यता बिना डाउनलोड गर्न असम्भव छ। यो कार्यक्रम विशुद्ध रूप मा पेशेवर छ र व्यावसायिक उद्देश्यहरु मा उन्मुख छ। एक मात्र तरिका तपाइँ कोशिश र यो दृश्य प्रभाव र गति ग्राफिक्स सफ्टवेयर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ एडोब प्रभाव परीक्षण पछि डाउनलोड।
After Effects को लाभ पछि नि: शुल्क
डाउनलोड योग्य प्लगइन को ठूलो पुस्तकालय
उन्नत अडियो र भिडियो प्रशोधन
प्रभाव को लागत को पूरा संस्करण कती हुन्छ?
After Effects मात्र एक सदस्यता को आधार मा उपलब्ध छ। Adobe After Effects मूल्य प्रति महिना $ 20.99 हो। यस कार्यक्रम को अतिरिक्त, सदस्यता क्लाउड भण्डारण, एडोब पोर्टफोलियो, एडोब फन्ट, र प्रीमियम सुविधाहरु संग एडोब स्पार्क को 100GB शामिल छ।
दोस्रो सदस्यता योजना $ 52.99/महिना को लागी एडोब क्लाउड सबै एप्स हो। यो २०+ रचनात्मक डेस्कटप र फोटोशप, इलस्ट्रेटर सहित मोबाइल एप्स को एक संग्रह, एडोब प्रीमियर प्रो र After Effects, साथै क्लाउड भण्डारण को 100GB, एडोब पोर्टफोलियो, एडोब फन्ट, र प्रीमियम सुविधाहरु संग प्रीमियम स्पार्क को।
परीक्षण अवधि को अन्त्य पछि के हुनेछ?
जब तपाइँको एडोब After Effects नि: शुल्क परीक्षण अवधि समाप्त हुन्छ, कार्यक्रम मात्र चल्न बन्द हुनेछ र तपाइँ सदस्यता लिन को लागी आवश्यक पर्दछ। एडोबले आफैं कोष डेबिट गर्दैन किनकि तपाइँ कार्ड डाटा प्रविष्ट गर्नुहुन्न।
नि: शुल्क परीक्षण शर्तहरु को After Effects हेर्नुहोस्
After Effects एक सुधारिएको एडोब प्रीमियर प्रो संस्करण छ?
मैले यस्तो गलत धारणा धेरै पटक सुनेको छु। यो अनौठो छैन किनकि दुबै कार्यक्रमहरु भिडियो पोस्ट उत्पादन संग काम गर्न को लागी बनाईएको हो। यसबाहेक, तिनीहरूको डिजाइन धेरै समान छ, साथ साथै केहि प्रकार्यहरु। तर, प्रीमियर प्रो भिडियो सम्पादन को लागी बनाईएको हो र यस उद्देश्य को लागी धेरै सुविधाजनक सुविधाहरु छन्। एकै समयमा, After Effects ग्राफिक्स, दृश्य प्रभाव र जस्तै सार्न को लागी उपयुक्त छ। सबै भन्दा राम्रो छनौट एक साथ यी कार्यक्रमहरु को उपयोग गर्न को लागी हो।
किन यो एक पाइरेटेड एक भन्दा लाइसेन्स संस्करण को उपयोग गर्न को लागी राम्रो छ?
तपाइँ पहिले नै सिकेका छन् कि कसरी मुक्त गर्न को लागी एडोब After Effects र अब हामी यो एक कानूनी संस्करण प्राप्त गर्न को लागी यति महत्वपूर्ण छ चर्चा गरौं। यो आश्चर्यजनक छैन कि यस्तो मूल्य र क्षमताहरु संग, ढिलो वा चाँडो, ह्याकरहरु यस कार्यक्रम को आफ्नो फटेको संस्करण पोस्ट गर्नेछन्। तर अझै पनी, किन धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई लाइसेन्स छनौट गर्न को लागी रुचाउँछन् र एक अवैध आधारमा प्रस्ताव गरीएको एक मुक्त Adobe After Effects डाउनलोड गर्न को लागी प्रत्येक महिना तिर्नु पर्छ?
तपाइँ दिन को कुनै पनि समय मा एडोब टेक्निकल टीम बाट पेशेवरहरु द्वारा प्रदान गरीएको समर्थन मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
ह्याकर र भाइरस सुरक्षा
आधिकारिक साइट बाट सफ्टवेयर डाउनलोड, तपाइँ एक १००% सफा र प्रमाणित उत्पादन पाउनुहुन्छ। तपाइँ पुरा तरिकाले निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यो कुनै पनि भाइरस हो कि तपाइँको कम्प्यूटर प्रणाली लाई बिगार्न सक्दैन। प्रयोगकर्ताहरु को लागी जो Adobe After Effects अवैध डाउनलोड को छनौट गरे, भाइरस को शिकार बन्ने खतरा धेरै पटक बढ्छ।
लगभग 100% कार्यक्रमहरु को सबै पाइरेटेड प्रतिलिपि को मूल कार्यक्रम कोड मा परिवर्तन हुन्छ। प्रभाव दरार पछि लाइसेन्स बिना एडोब स्थापना, तपाइँलाई थाहा छैन को र कुन उद्देश्य को लागी यो ह्याक भएको थियो र प्रोग्राम कोड मा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका मालवेयर (उदाहरण को लागी, भाइरस, ट्रोजन) एक पायरेटेड कार्यक्रम मा एकीकृत गर्न सकिन्छ, सक्रियता बाईपास को साधन को रूप मा।
तपाइँ घबराउनु पर्दैन किनकि तपाइँको कम्प्यूटर ढिलो छ किनकि यो प्रायः पाइरेटेड प्रतिलिपिहरु को उपयोग गर्दा हुन्छ। इजाजतपत्र प्राप्त सफ्टवेयर तपाइँको कम्प्यूटर लाई ढिलो गर्दैन। प्रभाव अनुप्रयोग पछि पाइरेटेड संग काम गर्दै, तपाइँ समय गुमाउनुहुन्छ। पाइरेटेड संस्करणहरु को गति अक्सर धेरै कारणहरु को कारण कम हुन्छ। धेरै जसो, बिभिन्न कार्यक्रमहरु कि नेटवर्क मा पोस्ट गरीएको अतिरिक्त निर्मित सफ्टवेयर छ। यो प्रयोगकर्ता को लागी बिल्कुल अनावश्यक हुन सक्छ तर उनको/उनको सम्झौता बिना स्थापित छ। नतिजा को रूप मा, यो प्रणाली को संसाधनहरु लाई यसको संचालन को बिस्तार को उपयोग गर्दछ।
तपाइँ धेरै कम डाटा हराउने सम्भावना छ यदि कार्यक्रम असफल हुन्छ। एक इजाजतपत्र संग, तपाइँ चिन्ता बिना अधिक काम गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम को पायरेटेड संस्करण काम को बीच मा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो एक त्रुटि को उत्पादन गर्न सक्छ जुन यो तपाइँ को लागी सामना गर्न को लागी गाह्रो हुनेछ किनकि त्यहाँ कुनै टेक्निकल समर्थन छैन। यदि स्थिरता र विश्वसनीयता तपाइँ को लागी महत्वपूर्ण छ, सफ्टवेयर को मात्र कानूनी प्रतिलिपिहरु को उपयोग गर्नुहोस्।
नि: शुल्क After Effects ADOBE अपडेट गर्नुहोस्
कुनै जोखिम छैन
प्रभाव डाउनलोड पछि अवैध एडोब को उपयोग प्रतिलिपि अधिकार को उल्लंघन हो। नतिजाको रूपमा, प्रयोगकर्ता आपराधिक, प्रशासनिक र नागरिक दायित्व को अधीनमा हुन सक्छ, विशेष गरी यदि यो धेरै कम्प्यूटर मा यस्तो सफ्टवेयर को उपयोग गर्ने संगठनहरु लाई चिन्ता गर्दछ। कानून प्रवर्तन निरीक्षण सामान्यतया कम्प्यूटर को जब्ती संग सम्बन्धित छन्। यसले काम रोक्न वा जटिलता निम्त्याउँछ। संगठनको गतिविधिहरु पक्षाघात हुन सक्छ र ग्राहकहरु र साझेदारहरु को लागी दायित्वहरु पूरा हुँदैनन्। यो कम्पनी को व्यापार प्रतिष्ठा मा एक बलियो प्रभाव छ। समुद्री डाकू कार्यक्रम संग, तपाइँ ठूलो घाटा सहन सक्नुहुन्छ।
4 प्रभाव मुक्त विकल्प पछि
यदि तपाइँ भिडियो सम्पादन भन्दा बढी केहि चाहिन्छ तर तपाइँ After Effects सफ्टवेयर को लागी तिर्न चाहनुहुन्न, तब सबैभन्दा राम्रो छनौट यो कार्यक्रम को लागी नि: शुल्क विकल्पहरु को उपयोग गर्न को लागी हुनेछ।
अधिक हेर्नुहोस् र छनौट गर्नुहोस् सबै भन्दा राम्रो भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर कि तपाइँको उद्देश्य को लागी एकदम सही हुनेछ।
भिडियो पोस्ट उत्पादन जस्तै पेशेवरहरु बनाउन शुरू गर्नुहोस्।
NATRON मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
Natron एक खुला स्रोत भिडियो सम्पादक हो। अपेक्षाकृत कम अनुभव संग, प्रयोगकर्ताहरु एक काफी पेशेवर स्तर मा भिडियो फुटेज सम्पादन गर्न सक्षम हुनेछन्। यो अनुप्रयोग एडोब After Effects वैकल्पिक हुन सक्छ जब भिडियो मा विशेष प्रभाव बनाउन को लागी गम्भीर उपकरण छनौट। Natron तपाइँ फाइलहरु र ढाँचा को धेरै प्रकार संग काम गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँलाई आवश्यक छ भने, यो भिडियो सम्पादक को कार्यक्षमता सजीलै खुला FX प्लग-इन्स संग विस्तार गर्न सकिन्छ। यद्यपि कार्यहरु को मानक सेट धेरै कार्यहरु गर्न को लागी पर्याप्त हुनु पर्छ। अन्य फाइदाहरु र अवसरहरु को बीच, कार्यक्रम तपाइँ उच्च संकल्प भिडियो, 2K र 4K संग काम गर्न अनुमति दिन्छ।
BLACKMAGICDESIGN नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
Blackmagic फ्यूजन (पहिले फ्यूजन र eyeon फ्यूजन को रूप मा जानिन्छ) Blackmagic Design द्वारा विकसित एक छवि लेआउट कार्यक्रम हो। यदि After Effects तपाइँ को लागी उपयुक्त छैन, तब यो कार्यक्रम एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। हलिवुड स्टुडियोहरु एक हजार भन्दा धेरै विश्व प्रसिद्ध blockbusters यस सफ्टवेयर को सहयोग संग यसको उपस्थिति देखि ३० बर्ष भन्दा बढी को लागी सिर्जना गरी रहेको छ।
आवेदन एक उपयोगकर्ता को अनुकूल इन्टरफेस संग उपकरण को एक शक्तिशाली सेट को उपयोग गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो तीन आयामी अन्तरिक्ष र भर्चुअल वास्तविकता को समर्थन प्रदान गर्दछ, कम्प्यूटर को कुनै पनी संख्या मा नेटवर्क प्रतिपादन र ग्राफिक्स प्रोसेसर को गति को संभावना। फ्यूजन मा, छवि पोस्ट प्रसंस्करण नोड प्रणाली को उपयोग गरी प्रदर्शन गरीन्छ। यो तपाइँ compositing, कुञ्जी, वेक्टर चित्र र वास्तविक 3D अन्तरिक्ष मा एनिमेसन प्रदर्शन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, साथै प्लेब्याक गति परिवर्तन गर्न को लागी, ट्रैकिंग र छवि स्थिरीकरण सेट गर्नुहोस्।
FILMORA प्रो नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ मात्र भिडियो पोस्ट उत्पादन मा पहिलो चरणहरु लिइरहनुभएको छ वा After Effects तपाइँको लागी धेरै गाह्रो लाग्छ, तब FilmoraPro को परीक्षण गर्नुहोस्। यो कार्यक्रम ५० भन्दा बढी कूल प्रभाव सेटि contains्हरु छन्। उनीहरुलाई धन्यवाद, तपाइँ अवसरहरु को एक विशाल राशि प्राप्त गर्न को लागी विशेष प्रभाव संग तपाइँको भिडियो लाई सुधार गर्न को लागी। तपाइँ तीखोपन परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लेयर जोड्नुहोस्, भिडियो ३ 360० डिग्री, आदि घुमाउनुहोस्।
कार्यक्रम तपाइँ भित्र पूर्व निर्धारित बाट एनिमेटेड शीर्षक बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ अधिक प्राकृतिक After Effects लाई जोड्नु पर्छ, तब स्टाइलिंग, मैट क्लीनर र गति ट्रेल्स तपाइँको निपटान मा हुनेछ। म यो पनि ध्यान दिन्छु कि यो एडोब After Effects वैकल्पिक वैकल्पिक अडियो को स्वचालित सिंक्रोनाइजेशन र भिडियो पटरियों को एक असीमित संख्या को समर्थन गर्दछ। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक भिग्नेट प्रभाव लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो नि: शुल्क अनुप्रयोग संग काम गर्न को लागी अविश्वसनीय रूप मा सजिलो छ। तपाइँको समय बर्बाद नगर्नुहोस् र यसको कार्यक्षमता को परीक्षण शुरू गर्नुहोस् र पेशेवर After Effects संग तपाइँको भिडियोहरु लाई सुधार गर्नुहोस्।
BLENDER नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
यो प्रभाव अनुप्रयोग पछि अर्को सभ्य विकल्प हो। यो खुला स्रोत सफ्टवेयर पुरा तरिकाले नि: शुल्क र धेरै भिडियो सम्पादन कार्यहरु संभाल गर्न सक्षम छ। दृश्य प्रभाव को अलावा, अन्तरक्रियात्मक 3D अनुप्रयोगहरु र एनिमेटेड ग्राफिक्स को निर्माण, भिडियो खेल डिजाइन ब्लेंडर को मुख्य विशेषताहरु को बीच मा छन्। यसबाहेक, म यूवी unwrapping, 3D मोडेलिंग, texturing, प्रभाव सिमुलेशन, एनिमेसन, भिडियो सम्पादन र कम्पोजिटि such को रूप मा यस्तो कार्यक्रम कार्यहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु।
प्रभाव भिडियो सम्पादन पछि मुक्त LUTs
यी डाउनलोड गर्नुहोस् नि: शुल्क भिडियो सम्पादन LUTs तपाइँको भिडियो फुटेज को छिटो रंग ग्रेडिंग को लागी।
After Effects डाउनलोड गर्नुहोस्
म्याक/जीत को लागी After Effects प्रयोग गर्नुहोस्
यो सफ्टवेयर को लागी नि: शुल्क परीक्षण गर्न को लागी, इजाजतपत्र परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको भिडियो मा परीक्षण गर्नुहोस्।
प्रभाव After Effects